Kube sikhathi esihle ngokumangalisayo, entwasahlobo, konke izimbali zawo ziwukudla ngemibala egqamile. Kwakuphakathi nalesikhathi sikhathi, abesifazane abaningi "yayizimisele" yisifiso nezimbali efanayo futhi egqamile, njengo kwezwe elisizungezile. Kodwa ngokuvamile, ngemva zasebusika ziya wazizwa zonke "izintelezi" yoshintsho kwesizini, ukuntuleka amavithamini, isikhumba ukoma , njll Abaningi bavele imibimbi esikufezile, imibimbi, abampofu isikhumba kuyaqina endaweni izihlathi kanye kwesilevu. Nobuhle nokucwala ngenjabulo izokunikela inqubo yokuthuthukisa umbala kuyaqina ebusweni. Kodwa kuthiwani uma, ngenxa
ukuvala kungekho nokucwala professional, awunaso isikhathi noma imali ukubavakashela? Ungene ukuthi omunye inqubo e salon ubuhle akuyona isikhathi eside ukuqinisekisa yalokho kuhle ubuso bakho.
Kuze kube muva nje, kagesi microcurrent ubuso
Kwaba kutholakala kuphela emitholampilo ethize Spas e-US naseYurophu.
Imishini esetshenziswa ngaphambilini kwaba nzima futhi akazange kubonakale kungenzeka
ukusetshenziswa ekhaya usloviyah.No lapha ngo-2008, udokotela e-San Diego (USA) Kerol Koul wakhulula insimbi yokuqala compact microcurrent
ukukhuthazwa imisipha isikhumba. Okwamanje lokhu kudivayisi kuphela eliqinisekiswe yi-American Bureau of imikhiqizo ukuphepha FDA and Drug Administration ngokusemthethweni Kunconywa nezesikhumba kanye Cosmetology.
Kanjani kudivayisi ukushukuma kanye rejuvenation ebusweni -
Idivayisi siqukethe ezimbili "iphenya" ukuma eyindilinga, kudala umuntu omubi omunye amacala omuhle. Amandla lwamanje lincane kakhulu - sesigidi eyodwa kuphela
amp, ngakho kunemidanti ngokuphelele kobuhlungu futhi akabubangeli ukungakhululeki.
Engakaluqali inqubo okumele asetshenziswe isikhumba ijeli ekhethekile (ingxenye
Kit), it kwandisa conductivity samanje isikhumba. Ncoma ukufeza inqubo imizuzu 5 nje ngosuku izinyanga 3. Shayela kudivayisi ngokunyakaza isiyingi izikhathi 3 noma usebenzise acupressure
Inkinga izindawo. In iziguli eziningi umphumela kwaphawuleka emva isicelo sokuqala, kodwa umphumela ozinzile futhi "ezijulile" ubuso-lift, kuyinto efiselekayo anamathele enkambweni. Emva inqubo, ungasebenzisa ijeli opholile (enikeziwe). Ukwandisa umphumela bephakamisa
Ungakwazi ngaphezu kwalokho usebenzisa umoya-mpilo serum.
Uyini umphumela zedivayisi ukushukuma kagesi ngoba skin-
ukushukuma electrical ubuso kuthuthukisa kwegazi,
Ngokuphawulekayo kwandisa kukhiqizwe collagen ezidingekayo futhi isikhumba
elastane, kukhuphuke izinqubo kwamakhemikhali kwesikhumba, okuyinto isiyonke kunikeza
umphumela umane emangalisa. Isikhumba iba abasebasha, kukhona okukhulu
nokwehlisa imibimbi kokuqina kwenzeka emhlathini umugqa futhi cheekbones, kusale lokhu umzuzu engiwukhumbulayo owawungemnandi njengoba nokuwohloka imisipha esihlathini, ukukhathala umphumela iphele. Ngokusho eziningi American odokotela-umphumela kule divayisi ingafaniswa umphumela ukusetshenziswa Botox.
Nakhu izibalo owomileyo ube yiziphethu zokwelapha, ngemva kwezinsuku ezingu-30 kwesicelo:
85% wabasebenzisi kuqashelwe ukuba ngcono okukhulu of wabuka ebusweni
73% wabasebenzisi isikuqinisekisile ukuba ngcono okukhulu ngo ibala
Izici isicelo kanye umkhawulo use-
It unikeza iziyalezo DVD, kodwa ngokuvamile akunakuba
zisebenza kuphela endaweni engaphakathi ezizungeze amehlo, emhlabeni izindebe futhi phakathi entanyeni.
Esikhathini kudivayisi akukho komkhawulo ukuze ukusetshenziswa izinhlobo ezahlukene isikhumba. ngendlela efanayo
idivayisi ingasetshenziswa kokubili amadoda, kodwa ngenxa isikhumba mkhulu
umphumela ubonakala kamuva.
Okwamanje, izindleko Iyunithi microcurrent
Skin kushukunyiswa ruble 10.500 kuphela (share) nge ukudiliva zonke izifunda
Russia. Ngaphambili, inkampani US ithengiswe
ngoba $ 400 kungafaki lokuthumela iyunithi eRussia. Thola izeluleko kanye
ukuthenga idivayisi lapha.
Cafa France (amaphuzu): Izibuyekezo abashayeli
Geography. Kangakanani ezwekazini i-Nyakatfo Melika isihlobo kwezinye
Nail Polish ukuqinisa: yimuphi ongcono? izinzipho Beautiful futhi unempilo